Blue Chalcedony Specimens – Stone to Home
100% Natural blue Chalcedony specimen ethically sourced from Malawi to accent your home, your way.
Blue Chalcedony Specimen 17
Origin: Malawi Dimensions: 5cm x 4.6cm x 3.8cm Weight: 87.4g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...
Blue Chalcedony Specimen 16
Origin: Malawi Dimensions: 5.5cm x 4.5cm x 4cm Weight: 83.1g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...
Blue Chalcedony Specimen 15
Origin: Malawi Dimensions: 6.7cm x 5.5cm x 3.2cm Weight: 120g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...
Blue Chalcedony Specimen 13
Origin: Malawi Dimensions: 6.2cm x 6cm x 4.5cm Weight: 160g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...
Blue Chalcedony Specimen 11
Origin: Malawi Dimensions: 7.2cm x 4.6cm x 4cm Weight: 149.2g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...
Blue Chalcedony Specimen 10
Origin: Malawi Dimensions: 4.8cm x 5cm x 3cm Weight: 46.8g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...
Blue Chalcedony Specimen 8
Origin: Malawi Dimensions: 6.5cm x 5.3cm x 5.5cm Weight: 230g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...
Blue Chalcedony Specimen 7
Origin: Malawi Dimensions: 6.5cm x 6.4cm x 4.8cm Weight: 223.8g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...
Blue Chalcedony Specimen 6
Origin: Malawi Dimensions: 6cm x 4.8cm x 4cm Weight: 131.5g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...
Blue Chalcedony Specimen 4
Origin: Malawi Dimensions: 6.5cm x 5.2cm x 3.2cm Weight: 82.9g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...
Blue Chalcedony Specimen 3
Origin: Malawi Dimensions: 6.2cm x 5cm x 4.2cm Weight: 115.7g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...
Blue Chalcedony Specimen 2
Origin: Malawi Dimensions: 3.8cm x 3.8cm x 2.9cm Weight: 43.5g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...
Blue Chalcedony Specimen 1
Origin: Malawi Dimensions: 6.8cm x 4.8cm x 3.2cm Weight: 97.3g Our Blue Chalcedony specimens are sourced from our partners in South Africa. Our partners travel to small villages in Malawi where they purchase...